IBhanki yoKutya yaseGalveston County ifumana i-50,000 yeedola kwiMorgan Stanley Foundation yokwandisa ukhetho lokutya kwiiNtsapho - iBhanki yokutya yaseGalveston County
IBhanki yoKutya yaseGalveston County ifumana i-50,000 yeedola kwiMorgan Stanley Foundation yokwandisa ukhetho lokutya kwiiNtsapho
admin Ngamana 17, 2022 0 Comment
IsiXeko saseTexas, TX-ngoMeyi 17, 2022 - I-Galveston County Food Bank ibhengeze namhlanje ukuba ifumene i-50,000 yeedola kwiMorgan Stanley Foundation yokwandisa ukhetho lokutya. Le ndlela inikezela ngeentsapho, abantwana kunye noluntu lombala kwiGalveston County landa ukhetho phakathi kokutya okukhoyo okanye iibhokisi zokutya kwii-arhente zeqabane le-Galveston County Food Bank okanye iindawo zeprogram, ukubonelela ngeendlela ezinempilo kunye nokuqinisekisa ukufikelela ekutyeni okuhambelana nokukhethwa kunye neemfuno zokutya. Ngoku kunyaka wayo wesibini, esi sibonelelo sikazwelonke sigxile ekwandiseni ufikelelo kwiintlobo ngeentlobo zokutya okunesondlo ngokujongana nemiqobo ejongene neentsapho kwiindawo ezihlala kuzo kunye nokuphucula amava azo ngokukhetha. Le mali iya kubonelela ngethuba elikhethekileyo leBhanki yoKutya yaseGalveston County ukuba iphonononge ukhetho olukhulayo kwiimodeli zokusasazwa kokutya eGalveston County ngelixa igcina i-COVID-19 yezempilo nokhuseleko.
Oko waqala lo bhubhani, ukunqongophala kokutya kuye kwachaphazela kakhulu iintsapho ezinabantwana, ngakumbi abo bakwiindawo ezisemaphandleni kunye noluntu lwebala. Umntu omnye kwaba-6, kuquka umntwana om-1 kwaba-5, ujongene nendlala eGalveston County. I-Galveston County Food Bank, ilungu le-Feeding America® network, yenye 200-ilungu-iibhanki zokutya ezifumana le nkxaso-mali evela Morgan Stanley Foundation. Kuqikelelwa ukuba olu ncedo luya kwenza i-Galveston County Food Bank ukuba incedise amaqabane ayo e-pantry ekutshintsheni kwi-Choice pantries. Ngenxa ye-Covid-19, iipantries zendawo ziguqule iinkonzo zazo zokuhambisa kuphela, ziphazamisa iinzame zangaphambili zeBhanki yoKutya ukuncedisa ii-arhente ezisebenzisanayo ekusekeni ii-pantries ngokuthenga kwisayithi kunye nokukhethwa kwabathengi.
“Inkqubo yokukhetha ukutya okuphekiweyo ayiboneleli kuphela ngamava oncedo okutya anesidima kubamelwane bethu abasweleyo, kodwa inkqubo inceda ekunciphiseni inkcitho yokutya kumakhaya abathengi,” utshilo uKaree Freeman, uMququzeleli weMfundo yeSondlo kwiBhanki yokuTya. “Abathengi bakhetha into abayaziyo ukuba iza kutyiwa. Le ndlela yokuhanjiswa kokutya ikwaququzelela ukufikelela ekutyeni okuhlangabezana nezithintelo zokutya kunye nobuntununtunu benkcubeko. "
Ayizizo zonke iipantries ezinendawo kunye nokukwazi ukuguqulela kwimodeli yoKhetho. Iqela leSondlo leBhanki yoKutya libonelela ngeendlela zokusasaza ukutya okunempilo ngokuqala ngokukhethwa kwemveliso xa kuzaliswa iishelufu zepantry kunye nokukhuthaza abathengi kwiimveliso ezityebileyo ngezondlo.
UFreeman uhlabela mgama esithi: “Ukutya okuzaliswe ziziqhamo nemifuno kuyimfuneko. Kodwa kukwabalulekile ukubonisa indlela yokulungiselela imveliso mhlawumbi eqheleke ngakumbi kwinkcubeko ethile. Siyixabisa kakhulu iMorgan Stanley Foundation ngokubonelela ngemali yokudiliza imiqobo kunye nokubonelela abamelwane bethu ithuba lokukhetha ukutya okufanelana neemfuno zabo. "
I-Feeding America iya kuxhasa iibhanki zokutya ezingamalungu ekuchongeni iindlela ezifanelekileyo zokubandakanya abamelwane abafumana ukhuseleko lokutya ngexesha lokwandiswa kokukhetha ukutya. Ukongeza, umbutho uya kubandakanyeka kwinkqubo yovavanyo olusesikweni ukuze uqonde ngcono ukuba ukhetho olukhulayo luchaphazela njani abantwana kunye neentsapho zabo.
"IMorgan Stanley Foundation inikezelwe ngaphezulu kwesiqingatha senkulungwane ukuqinisekisa ukuba abantwana bafumana isiqalo esisempilweni ebomini, kwaye sinebhongo ngokuxhasa inethiwekhi yeFeeding America ukunika ukhetho olwandisiweyo kwiintsapho ezinengxaki yokungakhuseleki kokutya," utshilo uJoan Steinberg, olawulayo. UMlawuli, iNtloko yeHlabathi yePhilanthropy eMorgan Stanley. "Izigidi zabantu zinengxaki yokungakhuseleki kokutya e-United States, ethe yandiswa ngubhubhane, kwaye siyakuvuyela ukusebenzisana ne-Feeding America ukunceda ukulwa indlala nokuxhasa abantwana kunye neentsapho ngeendlela ezintsha."
UMorgan Stanley unexesha elide lokuzibophelela ekuncedeni uluntu olujongene nendlala kwaye uye wanikezela ngaphezu kwe-41.7 yezigidi zeedola kwiminyaka elishumi edlulileyo kwi-Feeding America, ukuxhasa iinkqubo zokulamba ezihambisa uncedo lokutya kunye nokutya okunempilo kubantwana nakwiintsapho kwilizwe lonke.
Ukufunda ngakumbi malunga nokuba ungajoyina njani umlo wokuphelisa indlala, ndwendwela www.galvestoncountyfoodbank.org.
Malunga Galveston County Food Bank
IGalveston County Food Bank ibonelela ngokulula ukutya okunesondlo kwabahlelelekileyo ngokwezoqoqosho, abemi abangagcinwanga beGalveston County ngothungelwano lwemibutho yesisa ethatha inxaxheba, izikolo kunye neenkqubo ezilawulwa yibhanki yokutya ezigxile ekukhonzeni abantu abasesichengeni. Sikwabonelela aba bantu kunye neentsapho ngezibonelelo ezingaphaya kokutya, ezidibanisa nezinye ii-arhente kunye neenkonzo ezinokuthi zincede ngeemfuno ezifana nokunakekelwa kwabantwana, ukubekwa emsebenzini, unyango losapho, ukhathalelo lwempilo kunye nezinye izibonelelo ezinokubanceda ukuba babuyele ezinyaweni zabo kunye nakwiindawo zokuhlala. indlela yokubuyisela kunye / okanye ukuzimela. Ndwendwela www.bangcangco.com, sifumane Facebook, Twitter, Instagram kwaye LinkedIn.
Malunga noMorgan Stanley
UMorgan Stanley (NYSE: MS) yinkampani ehamba phambili yeenkonzo zezimali zehlabathi ebonelela ngoluhlu olubanzi lweebhanki zotyalo-mali, izibambiso, ulawulo lobutyebi kunye neenkonzo zolawulo lotyalo-mali. Ngeeofisi kumazwe angama-41, abasebenzi beFirm basebenzela abathengi kwihlabathi liphela kubandakanya iinkampani, oorhulumente, amaziko kunye nabantu ngabanye. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngoMorgan Stanley, nceda undwendwele www.fcloocnone.it.
Malunga nokondla iMelika
I-Feeding America® ngowona mbutho mkhulu wokunceda indlala e-United States. Ngothungelwano olungaphezulu kwe-200 yeebhanki zokutya, imibutho yebhanki yokutya ye-21 kwilizwe lonke, kunye nee-arhente zamaqabane ezingaphezu kwama-60,000, iipantries zokutya kunye neenkqubo zokutya, siye sanceda ukubonelela nge-6.6 yeebhiliyoni zokutya kumashumi ezigidi zabantu abasweleyo kunyaka ophelileyo. I-Feeding America ikwaxhasa iinkqubo ezithintela ukuchithwa kokutya kunye nokuphucula ukhuseleko lokutya phakathi kwabantu esibakhonzayo; izisa ingqwalasela kwimiqobo yezentlalo nenkqubo enegalelo kukhuseleko lokutya kwisizwe sethu; kwaye uthethelela umthetho okhusela abantu ukuba bangalambi. Ndwendwela www.feedingamerica.org, sifumane Facebook okanye silandele Twitter.
egqithileyo ngeposi Previous: Dibana noMnxibelelanisi wethu wamaVolontiya